Olee otú naghachi faịlụ si jiri mpụga ike amaba
> Resource> Draịvụ> Olee otú iji naghachi faịlụ si jiri mpụga ike mbanye
Bụ n'ebe ọ bụla Way naghachi faịlụ site My jiri mpụga ike mbanye?
My Seagate mpụga ike mbanye ka jiri. Mgbe m ejikọrọ ya kọmputa m, ọ na-ghọtara dị ka a USB ngwaọrụ n'okpuru diski ike. Apụghị m imeghe ya. Ọ gwara dị ka onye na-amaghị ngwaọrụ. M na-eji a Windows kọmputa na m chọrọ m mpụga ike mbanye data azụ. Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ naghachi data si m jiri mpụga ike mbanye? Daalụ nke ukwuu.
Nke a bụ n'ezie manụ nsogbu. Ebe ọ bụ na gị mpụga ike mbanye ike ka a ghọtara site na kọmputa, ị nwere ike naghachi jiri mpụga ike mbanye data na a-atọ ndị ọzọ data mgbake usoro. Wondershare Data Recovery, Ma ọ bụ Wondershare Data Recovery for Mac bụ a oke maka gị. Ọ na-enyere gị aka naghachi data ọnwụ ruru ka ike mbanye okuku, usoro njehie na mberede nhichapụ. Ihe niile ị chọrọ ime bụ iṅomi gị jiri mpụga ike mbanye na nke a omume na-ego otú ọtụtụ faịlụ i nwere ike naghachi.
Nweta ikpe mbipute nke Wondershare Data Naghachi na ịrụ jiri mpụga ike mbanye data mgbake.
Olee otú Naghachi Data si a jiri mpụga ike mbanye? Naanị na 3 Nzọụkwụ
Lee, anyị naghachi data si a jiri mpụga ike mbanye na Wondershare Data Recovery maka Windows. Mac ọrụ biko na-Mac version na ịrụ mgbake na yiri nzọụkwụ.
Nzọụkwụ 1 Họrọ mgbake mode naghachi faịlụ site jiri mpụga ike mbanye
Mgbe wụnye na launching Wondershare Data Recovery, ị ga-nyere na 3 mgbake ụdịdị, dị nnọọ ka ị pụrụ ịhụ site oyiyi n'okpuru. Naghachi data si a jiri mpụga ike mbanye, ebe anyị na-agbalị na "Echefuola File Iweghachite".
Nzọụkwụ 2 Họrọ gị jiri ike mbanye ka iṅomi Data
Usoro ihe omume ga-depụta niile Obodo partitions na mpụga ike draịva na kọmputa gị. Ị dị nnọọ mkpa họrọ gị mpụga ike mbanye na Pịa "Malite" ịnọgide.
Nzọụkwụ 3 Lelee recoverable faịlụ na-agbapụta ha selectively
Doppler ga rụchaa anya. Niile hụrụ ọdịnaya ga-egosipụta na edemede. Ego faịlụ aha iji hụ ma ha na-ihe i furu efu ma ọ bụ. N'ihi na oyiyi faịlụ, ị pụrụ ọbụna ịhụchalụ ha.
Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike họrọ faịlụ ị chọrọ iji naghachi na pịa "Naghachi" na-azọpụta ha gị na kọmputa. mgbazinye adịghị ịzọpụta faịlụ gị mpụga ike mbanye ebe ha na-efu n'ihu.
IHE: Mgbe agbake faịlụ, anyị ukwuu atụ aro ka ị idozi gị mpụga ike mbanye maka ọdịnihu ojiji.
Banyere jiri mpụga ike mbanye Data Recovery:
Ọ bụrụ na data gị jiri mpụga ike mbanye na-ezi uche mebiri emebi, ọ gaghị ekwe omume iji naghachi ya. Nke a bụkwa ihe mere Wondershare Data Recovery awade a ikpe version. N'ọnwụnwa a version pụrụ inyere gị aka ego otú ọtụtụ faịlụ na ị nwere ike naputa na ego ma faịlụ hụrụ site na ya bụ ihe ị chọrọ iji weghachite ma ọ bụ.
Ike mbanye ndabere Iweghachite: Olee naghachi na nkwado ndabere siri ike mbanye Data